Tetikasa varotra mifanohitra amin'ny dingana | Martech Zone
Tetikasa varotra mifanohitra amin'ny lamina
Zoma, Martsa 2, 2012 Douglas Karr
Betsaka amin'ireo mpanjifanay no mila fanabeazana kely rehefa miakatra an-tsambo izahay. Efa zatra miasa miaraka amin'ireo mpivarotra am-barotra toa ny miantsena fivarotana enta-madinika izy ireo. Tian'izy ireo ny manasokajy, ny vidiny ary ny fizahana. Nahavita marketing izahay tetikasa taloha ary tena manalavitra azy ireo tokoa isika izao. Raha tsy hoe afaka manome vidiny tetikasa iray hahitana iteration maromaro isika dia matetika no miala amin'ny fifanarahana. Isika kosa dia miara-miasa amin'ny mpanjifantsika amin'ny fomba mitohy hamoronana doka marketing.
Ny olana dia tsy mitovy ny fampiharana marketing. Tsy mividy mpizara ianao fa mamolavola paikady mifototra amin'ny loharano sy ny valiny. Ny marketing dia a vonona, afo, kendrena paikady. Mba hahazoana fahatakarana ny fiantraikan'ny tetik'asa marketing dia tsy maintsy manatanteraka sy manomboka mahita ny valiny ianao. Tsy raharahako izany famolavolana endrika tranokala izany, programa marketing mailaka, na iray fotsiny izany famolavolana infographic.
Ohatra, rehefa mamolavola infografika izahay, dia manolotra volavolan-dalàna miaraka amina volavolan-dalàna tena izy mba hampisehoana amin'ny mpanjifa ny asan'ny kanto sy ny fametrahana azy. Raha tian'izy ireo izany, dia mandalo famerimberenana maromaro miaraka amin'ny atiny izahay mba hahazoana antoka fa milaza ny hafatra marina izy io. Rehefa manana fanekena feno isika ary voamarina sy voarakitra an-tsoratra ny zava-misy ataontsika vao avoaka ilay sary. Izahay koa dia tsy mametaka azy io manerana ny tranonkala rehetra… handefa eo an-toerana izahay, hiantoka fa manana fitaovana handrefesana ny fiantraikany, hijerena ny valiny, ary avy eo hanomboka hampiroborobo azy. Vonona, afo, kendrena.
Rehefa miara-miasa amin'ny mpanjifa amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana izahay dia manao izany na oviana na oviana angataho izy ireo hanao sonia fifanarahana ho an'ny teny lakile manokana. Manatsara ny sehatra sy ny atiny izahay (vonona), avy eo dia manatanteraka ny paikady amin'ny alàlan'ny fandefasana ilay tranonkala izahay (afo), ary avy eo dia mizaha ny fanondroana ny tranokala sy ny teny lakile iza no mahomby indrindra… ary manatsara azy ireo indray izahay (tanjona).
Tianay ny daty kendrena, saingy jereo izy ireo tonga ary mandeha miaraka amin'ny mpanjifa saika. Fantatry ny ankamaroan'ny mpanjifa fa hisy fanovana sy fanitsiana fanampiny hitranga ka tsy daty famaranana ny daty kendrena fa hafainganam-pandeha kokoa. Ny mpanjifa sasany kosa dia tia manindry ny daty… raha tsy ara-potoana ara-potoana miaraka amin'ny enti-manana na mangataka fanovana fanampiny… NA miova ny tsena ary mitaky fanovana indray ny fanentanana. Ny mpanjifa hafa kosa dia nanaiky ny 'ol “Andao hipaoka ny mpivarotra mba hanandrana hamoaka vola bebe kokoa amin'ity fifandraisana ity”… Nianatra nandroaka ireo mpanjifa ireo izahay.
Ny lakilem-pahombiazana amin'ny famolavolana fomba mahomby amin'ny marketing dia ny mailamailana ary ny hamindra faran'izay haingana. Vonona, afo, kendrena. Vonona, afo, kendrena. Vonona, afo, kendrena. Fantaro fa mihetsika daholo ny sombin-javatra ary mitaky fandanjalanjana marefo izy io mba hahazoana tetika marketing mandresy. Raha mamolavola paikady ianao avy eo aloha ka hatrany aoriana, dia arotsaho ao ny volanao sy ny volanao rehetra, fa aza mahay manitsy ny vokatra rehefa diso ny lalana.
Rant: ny tsenan'ny piraty an-tserasera